Ịdị na ịnọ na otu ahịa - na otu click luckily?
Ya na ọdịdị n'ahịa ndị ọzọ
Kedu ka m ga esi gaa n'ihu?
Ọ dị mma, ọ dị mma?
Ọnụ ọgụgụ ụmụ nwoke dị elu karịa taa. Onye nwere obi nkoropụ jọgburu onwe ya, nke ọzọ nwere ike ikwu oke elu. Ọtụtụ ndị na-enweghi nsogbu ma ọ bụ na-enweghi ike izute mmadụ. Ọtụtụ ndị ọzọ na-anwa ụzọ nke oge ịkpọtụrụ na ịntanetị. Ebe nrụọrụ weebụ ịntanetị na-ewu ewu karịa mgbe ọ bụla.
Na-agba ọsọ otu ugboro na ugbu a
N'oge gara aga, ịchọta "ọkara nke abụọ" ya mere ka ọ bụrụ ihe siri ike ma na ndụ dị adị na-anọkarị n'ebe ọrụ ma ọ bụ ndị enyi, ọ bụrụ na ịntanetị, enwere ọtụtụ ohere taa. Ọbụna onye na-emeghe, ma nwa okorobịa nwere ọgụgụ isi na-achọpụtaworị ya - ọtụtụ n'ime - Dulcinea.
Mụta ịchụ nta
N'ihi na klientele 55 + na eru na niile maka ịhere ma ọ bụ ọrụ n'aka ndị dị ka oru, onwe ya n'ọrụ, nke iri obere oge ma ọ bụ ọchịchọ nke ya, na-ekwe nkwa ohere ọhụrụ meghere ekele online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ọrụ. Nke sprightly 60 afọ nke okwu na-ama nwere otu nwaanyị a na kọfị ụlọ? N'ihi Internet, ọbụna agbara kwe omume. Long nwaanyị agaghịkwa nwere na-eche ka e dere, ma nwere ike n'onwe ya ịbụ maka igba.
Na ndụ n'ezie, ohere nke nọsị, dịka ọmụmaatụ, na-ezute ma hụ onye na-azụ akwụkwọ nke ọma, ma ọ bụ onye na-enweghị mmasị na ya, nwere ọdịmma ọdịbendị, dị ka ihe dị ka efu. Ịntanetị ga-ekwe omume!
Dị ka o siri sie ike dị ka ịchọọ onye ị ga-ahụ na-enweghị ịntanetị, ọ dị mwute ikwu na ọ dị mfe taa iji na-eme ka ndị na-amaghị nwoke ma ọ bụ nwanyị na-enwe mmasị na-ele anya.
Ụfọdụ ndị ikom na-ejikarị akwụkwọ ozi na-eme ka ndị na-ama nwoke na nwanyị nwee mmekọahụ na-emekarị ka ha chee na ọ bụ naanị ha ga - enye "iwu" otu nwanyị. Ihe profaịlụ nke ihe omuma na ihe ndi choro bu ihe eji eche n'ezo n 'abali abia, inwe mmekorita nwoke na nwanyi n'adighi ekwe. Ebe ọ bụ na ọ fọrọ nke nta ka onye ọ bụla nwee ohere Ịntanetị, ọkwa nke profaịlụ na-amịkọrọ, ụfọdụ ndị inyom na-enweghi nsogbu na-ekwu. Ọbụna mgbanwe nwoke na nwanyị, nke ga-akwụ ụgwọ maka iji ọrụ ahụ eme ihe, ọkwa dị na-agba agba ma ọnụ ọgụgụ nke ndị na-edebanye aha n'enweghị aha ọ bụla n'enweghị ihe osise, ebiliwo elu.
Ntuba aha otutu na profaịlụ na-adọrọ adighi na adighi adighi nma na profaịlụ nke ihe omuma ya dika: "Achugh ihe obula. Naanị m na-ele anya gburugburu "dịka ihe na-adịghị mma. E wezụga nke ahụ, ọ bụ ezie na ịda ada na ọtụtụ fakes, ọnụọgụ kọntaktị na ịmara ọtụtụ agwa dị iche iche kachasị elu ebe a. Onye na-elezi anya n'eziokwu na-ele anya na mkpịsị aka ebe a.
Ntachi obi, ma ọ nwere ike iwepụ oge na saịtị ndị enyi gị!
Ndị na-abịa ọhụrụ na-ejikarị akwụkwọ ozi na nleta ibe ya. Ndị di na nwunye nwere ike ịchọta onwe ha n'ime otu puku otu na nanị ntinye ole na ole maka mmekọrịta na-adịgide adịgide, nke a bụ eleghị anya ọpụiche a ma ama na nchịkwa.
Ndị 36 na nke 45 dị otu afọ abụghị nanị otu afọ ndụ siri ike na ndụ dị adị. Ka e kwuchara, a na-emekarị ndị ogbo nwere ike ịbanye n'ime ezinụlọ a tụkwasịrị obi ma nye ha ma ọ bụ na ha adịghị njikere maka mgbakọ nke abụọ.
Kedu ihe ị ga-eme mgbe ezigbo enyi gị ghọrọ ịhụnanya?
Maka nlezianya siri ike, ị ga-edozi ihe gbasara echiche na ọchịchọ gị. Otú ọ dị, onye ga-atụ anya na ndị na-agwubeghị akụkọ ochie ha. Ngwa ngwa, otu onye na-amaghị ihe ọ bụla bụ "stopgaper".
Naanị ahịa na Intanet
Ọzọkwa, onye a ga-akwadebe na onye ekwuru na Adonis na ụbọchị mbụ ya na foto dị na foto ya nwere obere ihe yiri ya.
Ka o sina dị, n'agbanyeghị amaghị aha, mmadụ kwesịrị ịkwanyere onye nke ọzọ ùgwù na nkwanye ùgwù.
Ihe kachasị aghụghọ bụ nke kachasị njọ na afọ. Ọzọkwa, ndị mmadụ nwere nsogbu iji kweta na ntutu ha na-ebelata. Ụmụ nwanyị na-achọ ịghọ aghụghọ ule ha. N'ihi ya, ọ na-emekarị na ọ bụghị eziokwu, mgbe ọ bụla 10 agbacharala foto afọ.
Mgbagwoju anya na nke mbu bu ihe a ga-aputa.
Life abụghị arịrịọ egwu, ọ dịghịkwa ezigbo ma ọ bụ Internet. Ọ bụrụ na onye maara nke a na-ewe uru nke ebube art nke ụka, mgbanwe na na-amata onwe ma ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ nke ndị kpọrọ ke ngwaahịa ahịa na ya, ohere, bụ a ga-ekwe omume obi ụtọ na a ọtụtụ onwe-ahụmahụ ihe ọ bụla na ụzọ.
Eleghi anya i kwesiri inwe ndidi karia.